बधाई दिँदै गर्दा छुटेका लीला सेलिङ मावोका महत्वपूर्ण पाटाहरू - Naya Online
Wednesday 19th , January 2022
बुधबार, माघ ५, २०७८
Naya Online TV
बधाई दिँदै गर्दा छुटेका लीला सेलिङ मावोका महत्वपूर्ण पाटाहरू
Naya Online, No one news portal from Nepal
बुधबार, साउन २०, २०७८ (August 4th, 2021 at 11:07am ) प्रवास, ब्रेकिंग न्युज, ब्लग
लीला सेलिङ् मावोको फेसबुक पाना पल्टाउँदा यस हप्ता उनलाई बधाई तथा शुभकामना दिइएका चाङ भेटिन्छन् ।
सेलिङ्ले हालै युनिभर्सिटी अफ सुर्रेबाट क्रिमियोलोजी कर्पोरेट क्राइम एण्ड कर्पोरेट रेस्पोन्सबिलिटीबाट स्नात्तकोत्तर हासिल गरेकी छिन् । त्यसैले उनलाई बधाईपत्र तथा शुभकामना आएका हुन् ।
बधाईपत्रहरूबाट थाहा हुन्छ, उनी पाँचथर थर्पु समाज युकेको सल्लाहकार, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युकेको उपाध्यक्ष, पाँचथर समाज सेवा युकेकी आजीवन सदस्य, किरात याक्थुङ चुम्लुङ युकेकी उपाध्यक्ष, सेवारो कलाकार संघ युकेको आजिवन सदस्य, नेपाली समाज युकेको उपाध्यक्ष, थामेन्दिङ्मा चुम्लुङ युकेकी संस्थापक उपाध्यक्ष छिन् ।
संघसंस्थाको स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय रहनु, निरन्तर समाजसेवा गर्दाको परिणाम उक्त संघसंस्थामा नजिक रहने र शुभचिन्तकहरूले सेलिङलाई शुभेच्छा प्रकट गरे । घरगृहस्थी सम्हाल्नु, संघसंस्थामा सक्रिय रहेर पनि पढाईलाई निरन्तरता दिनु बधाईका मुख्य विषय बने ।
माथिका विषयबाहेक अलि फरक ढङ्गमा भीमकुमार सेलिङ्को शुभकामना आएको छ । भीमले लेखेका छन् –“२०४८ सालको शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रा.वि. स्तरमा स्थायी पास गरी लगभग १० वर्षसम्म शिक्षण पेसा तथा प्रधानाध्यापकसमेत जिम्मेवारी वहन गरेकी छोरी लीलाहाङमा सेलिङ माबोले University of Surrey Guilford UK बाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकोमा हार्दिक बधाई साथै शुभकामना ।”
यसबाट थाहा हुन्छ, लीला सेलिङ बेलायत पुग्नुअगाडि लामो समय शिक्षिका थिइन् । १० वर्ष शिक्षण गर्नु भनेको करिब हजारको संख्यामा विद्यार्थीलाई ज्ञान दिनु हो ।
तर धेरै बधाई शब्दहरूबीच लीला सेलिङका अन्य मुख्य प्रतिभा भने ओझेलिएका छन् । उनी कवि, गीतकार, लेखक, चिन्तक हुन् । पेशामा डेन्टल नर्स हुन् । राजनीतिमा चासो राख्ने सेलिङले हार्ट डिस्टीक काउन्सिलको निर्वाचनमा ब्ल्याकवाटर एण्ड हवलो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । त्यसैले लीलाको चर्चा हुनसाथ यी कुराहरू पनि जोडिएर आउँदा राम्रो हुन्छ ।
डेन्टल नर्सको रूपमा उनले धेरै ‘हेल्थ टिप्स’हरू दिएकी छिन् । जुनकुराहरू अनलाइनको आर्काइभहरू पल्टाउँदा भेटिन्छन् । पत्रकार दीपेन्द्र राईले रातोपाटी डटकममा उनको नर्सिङ पेशा र दाँतलाई सफा, चम्किलो बनाउने टिप्सबारे चर्चा गरेका थिए । सेलिङका दन्त–टिप्सहरू अङ्ग्रेजीमाध्यममा निकै छन् । जसलाई नेपाली भाषामा अनुदित गरेर केही अनलाइनहरूले प्रकाशन गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढि चर्चा गर्नुपर्ने त उनको कवित्व भावना हो । शिक्षिका, लेखिका र नेतृत्व क्षमता लिएकी नारी लाहुरेनीमा खुम्चिँदा त्यसले दिने पीडाबारे भाव अभिव्यक्त गरिएका उद्गारहरू निकै नै छन् । लेखहरूमा त्यहि कुरा झल्कन्छ । पछिल्ला दिनमा भइरहेको भर्चुअल कार्यक्रमहरूमा अनिवार्य उपस्थित हुँदै आफ्ना कुरा राख्छिन् –‘म महिला भएर महिलाकै कुरा उठायो नभन्नुहोला, तर उठाउनैपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।’
सेलिङको वि.सं. २०७१ सालमा ‘लाहुरेनी पीडा’ कविता पुस्तक आएको थियो । यस पुस्तकबारे त बेग्लै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने नेपाली समाजमा लामो समयदेखि लाहुरप्रथाको लामो इतिहास छ ।
तर यहाँ यति चाही लेखियो –हाम्रो समाजमा लाहुरे छोरा लाहुरे हुनु र ज्वाई लाहुरे पाउनुलाई निकै महत्वको विषय बनाइन्छ । तर लाहुरेको दुःख र लाहुरेनीको पीडालाई साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गरिँदैन । लाहुरेका विषयमा त धेरै कथा, कविता, उपन्यास लेखिए । गीत गाइए, चलचित्र बने । यता लाहुरेनीको सन्दर्भमा लीला सेलिङ मावोले ‘लाहुरेनी पीडा’ र सुस्मा रूपाबुङ राईले ‘लाहुरेनी फूल’ बाट लेखनी शुरु गरेका छन् ।
लाहुरेनीका सवालहरूलाई स्वयं लाहुरेनीले नै उठाउनुपर्ने ? यो प्रश्न स्वयं लीलाहरूले नै उठाइरहेका छन् । जसले पीडालाई नजिकबाट बुझेका छन् ।
अन्त्यमा, लीला सेलिङ मावोले जीवनको मध्यान्हतिर आएर उच्च शिक्षा हासिल गरेकी छिन् । विवाह गरेपछि पढाईलगायत अन्य सपना सकियो, झनै सन्तान जन्मिएपछि पुरै जीवन सन्तानको लागि जीवन बिताउनुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यतालाई मावोले तोडेकी छिन् र स्नात्तकोत्तर हासिल गरेकी छिन् । यो प्रसँग धेरैको लागि प्रेरक हुन्छ । उनलाई अझै यस्ता सफलता मिलोस्, अनगिन्ती शुभकामना ।
नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।
नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान, बेलायतको सम्मान डा. बराललाई र पुरस्कार संगीतकार गुरुङलाई
शनिबार, माघ १, २०७८
काठमाडौँ, १ माघ । नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान, बेलायतले सन् २०२१ का लागि सम्मान तथा...
नेफिन आईसीसी संयोजक मानबहादुर रानामगर संगठनबाट निष्कासित
काठमाडौं, १ माघ । नेफिन आईसीसीका तत्कालिक संयोजक र सहसंयोजकलाई कार्यवाही गरिएको छ ।...
विनेसाम जापानको दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न, नेतृत्वमा पुनः इङ्नाम
सोमवार, पुस २६, २०७८
जापान, १० जनवरी । जनवरी ९ तारिकमा जापानको टोकियोस्थीत विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ (विनेसाम)...
अमेरिकाबाट ‘यो जीवन मिठो’ सार्वजनिक
शनिबार, पुस २४, २०७८
काठमाडौं, २४ पुस । अमेरिकामा रहेका युवा निर्देशक सुमन दाहाल निर्देशित पछिल्लो भिडियो ‘यो...
अमेरिकाको टेक्सासमा याक्थुङ चुम्लुङको चासोक तङनाम साँझ र अधिवेशन सम्पन्न
सोमवार, पुस १९, २०७८
नगेन्द्र ईङनाम “आठराईली” टेक्सास, ३ जनवरी । अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित अर्भिङ शहरमा लिम्बुहरुको मौलिक...
मकाउमा मौलिक चाडपर्वहरुको अवसरमा सामुहिक रूपमा शुभकामना आदानप्रदान
मङ्लबार, पुस १३, २०७८
-सन्देश ‘ईङघङ’ मकाउ, १३ पुस । मकाउमा सामुहिक रूपमा मौलिक चाडपर्वहरुको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान...
सर्जकहरूले मास्टर मित्रसेन थापालाई सम्झे
लन्डन, २८ डिसेम्बर । पुराना एवम् चर्चित लोकगायक मास्टर मित्रसेन थापा मगरलाई उनले दिएको...
अमेरिकामा भव्यतका साथ मनाईयाे चासाेक तङ्नाम
सोमवार, पुस ५, २०७८
न्युयोर्क । अमेरिकामा चासोक तङ्नाम धुमधामका साथ मनाइएको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङ् अमेरिकाको...
किरात याक्थुङ चुम्लुङको ग्रेटर लण्डन शाखाले उधौली र चासोक तङ्नाम मनायो
सोमवार, मंसिर २७, २०७८
प्रिन्स याक्खा लण्डन, १३ डिसेम्बर । किरात याक्थुङ चुम्लुङको ग्रेटर लण्डनको सिनियर ब्रान्चले फेल्थाम...
संस्थाको कुशल व्यवस्थापक सम्मान दिपेश लिम्बुलाई प्रदान
शनिबार, मंसिर ११, २०७८
न्यूयोर्क, २७ नोभेम्बर । किरात आक्थुङ चुम्लुङ अमेरिकाले दिपेश लिम्बुलाई संस्थाको कुशल व्यवस्थापकको रूपमा...
Tweets by @Nayaonline1
सञ्जय तुम्बाहाम्फेकृत ‘सृष्टिको याङदाङ’ लोकर्पण
मङ्लबार, माघ ४, २०७८
अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेशिन गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण
ठेक्केदारको कारण लुम्भुघाट पुलको काम अलपत्र
दयालको पुस्तक ‘खपर्‍या एवम् देवताहरूबिचको द्वन्द्व र सृजित विभेद’ प्रकाशित
‘अक्षर अक्षरमा देश’ लिएर आए दीपक समीप
आइतवार, माघ २, २०७८
पोक्लाबाङ यक माङ्गेन्ना लुङ्धुङको प्रथम साधारणसभा सम्पन्न
सुचना विभाग दर्ता: २६८०/०७७–७८
खापुङ क्रिएसन प्रा.लि.को लागि
संरक्षक सुन्दर आले
प्रधान सम्पादक तथा सञ्चालक देवेन्द्र खापुङ लिम्बू
सम्पादक सीता सुब्बा
कार्यक्रम प्रस्तोता मिरान लिम्बू
साहित्य विभाग प्रकाश दिप्साली राई
गणेश वरुम्हाङ (अमेरिका)
हाङसेम केरुङ (कोरिया)
सन्देश इङ्घङ (मकाउ)
मुकेश राई (युके)
जेडी गाउँले (मलेसिया)
वारङहाङ थाम्सुहाङ (साउदी अरेयिबा)
सुजन सिरेङ लिम्बू (युएई)
Copyright © 2022 Naya Online.com. All rights reserved
Host By: Bikashsoft Technology